Mkpebi nyocha OpinionLab na Ule | Martech Zone
Ntughari bụ ikpo okwu maka inweta ozi ndị ahịa site na nyocha na nzaghachi nke weebụsaịtị gị. OpinionLab na - akpọ ya Data-Of-Customer (VOC) Data. OpinionLab na-agbasawanye atụmatụ ya ugbu a iji tinye ha abụọ nchịkọta nchịkọta na ule. Nke a na-enye aka inye aka dozie nzaghachi nke ndị ọbịa gị na mmemme saịtị ha.
Na ọnụ ahịa nke inweta onye ahịa ọhụụ ugboro isii ruo ugboro asaa nke ijigide nke dị ugbu a, ihe dị mkpa maka ụdị iji tinye aka na ntinye n'aka ndị ahịa etinyebeghị aka karịa,? kwuru, sị Rand Nickerson, onye isi oche nke OpinionLab. Mgbe Web nchịkọta nye nghọta dị oke mkpa banyere ihe ndị ọbịa na-eme n'ịntanetị, nkwanye data VOC na-ekpughe ihe kpatara ndị ọrụ ahụ ji akpa agwa ka ha si eme. Site na mmụba nke ngwa ọrụ nnabata anyị gosipụtara ịgụnye ọtụtụ na nyocha A / B dị ka Omniture Test & Target, ụdị nwere ike ịkọwapụta akwụkwọ ndị akọwapụtara peeji nke karịa. nchịkọta Nsonaazụ ule. Ewezuga ịchọpụta ihe ịga nke ọma ma ọ bụ nsogbu nsogbu karịa nke ọma, ụlọ ọrụ nwere ike ịme ihe mmụta dị mkpa n'ofe weebụsaịtị ma ọ bụ nzukọ ha niile, na-abawanye ROI nke ule ọ bụla emere.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ nchịkọta data na-ekpughe na mberede n'ike na peeji nke ibiaghachi ọnụego, ị nwere ike iwekota akụkọ banyere ndị ahịa iji mụta ihe kpatara ndị mmadụ ji ahapụ. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịnata ọkwa na-egosi na ọtụtụ ndị ọbịa na-ekwu okwu ọjọọ, ị nwere ike pịa otu ugboro iji lelee nke onye ọrụ ọ bụla nchịkọta data ma ọ bụ oge playback.
The nchịkọta mwekota na - arụ ọrụ na WebTrends, TeaLeaf, Google Analytics, Omniture, CoreMetrics na ndị ọzọ.
Tags: nyocha ndị ahịaụlọ nyocha ụlọechicheolu dataolu onye ahịa